(मत्स्य बाट पठाईएको)
हे प्रभु! हे गुण निधान! जति मैले यो संसारमा चिजहरू देख्छु तपाईंले त्यो सबैलाई एकै छिनमा नास गर्न सक्नु हुन्छ । तपाईंबाट नै यो सृष्ठीको शृजना भएको हो । तपाईं नै यसको पालन गर्नु हुन्छ । तपाईं एक अदृश्य शक्तीको रूपमा व्याप्त हुनुहुन्छ । यो संसार तपाईंको शरीर हो, चन्द्रमा र सूर्य तपाईंका नेत्रहरू हुन्, यो वायू तपाईंको स्वाँस हो । मेघहरू तपाईंका केश हुन् । तपाईंको लिला ठूला ठुला नारद, वशिष्ठ, कश्यप दुर्बाशा,आदी तपश्वी ऋषि मुनीहरू इन्द्र, बरुण, ब्रह्मा, आदी देवतागणहरूले त थाहा पाउन सक्दैनन् भने म एक सामान्य मर्त्य चोलाको मनुष्यलाई के थाहा हुनु मैले तपाईंको लिला थाहा न पाएर जो आफ्नो घमण्डीपना देखाएँ त्यसमा मलाई क्षमा गर्नु होस् । म मात्र नभएर यो सारा जगत नै तपाईंको दाश हो । मेरो भक्ती ठूलो थियो जसले गर्दा तपाईंले म माथी कृपा गरेर दर्शन दिनु भयो म धन्य हुँ जसको दर्शनको लागि यो सारा जगत नै तडपीरहेको छ उनको मैले सहजै दर्शन पाएँ र सेवा तथा प्रार्थना गर्न पाएँ । जसको बल वायू समान छ, जसको पानीको जस्तै मधुरता र सूर्य समान तेज छ । जसमा फूल समान कोमलता र विजुली झैँ चमक छ । जसको मेघको समान वाणी छ जो चराचर जगतको सृष्टी कर्ता, पालन कर्ता र संहार कर्ता हो उन प्रमेश्वरलाई मेरे बारम्बार प्रार्थना छ ।
मत्स्य भगवान सत्यव्रतको प्रार्थनाबाट खुसी भए अनि आफ्नो प्यारो भक्त सत्यव्रतलाई भन्दा भए "भक्त ! आजको सातौँ दिनमा तिनै लोक प्रलयकालको जलराशीमा डुब्ने छ । त्यसबेला मेरो प्रेरणाले तपाईं सामु एक ठूलो डुङ्गा आउने छ । तपाईंले सबै जिवहरू र अन्नहरूको बिज लिएर त्यसै डुङ्गामा सप्तर्षिहरूका साथमा बसेर घुम्नु आँधी र हुरीका कारण नाउ डगमगाउन लाग्ने छ । त्यसै बेला म यसै माँछोको रूपमा तिमीहरूको रक्षा गरौँला ।" यति भनेर भगवान अन्तर्ध्यान भए । न भन्दै सातौँ दिनमा सत्यव्रतको सामु सबै पृथ्वी जलमा डुब्न लाग्यो । राजालाई भगवानको कुरा याद आयो उनले एक नाउ देखे । उनी बिउहरू लिएर सप्तर्षिहरूका साथ त्यसै नाउमा बसे । केही छिन पछि समुद्रमा भयंकर आँधी आयो आँधीका कारण नाउ डगमगाउन थाल्यो । सप्तर्षि लगाएत राजा सत्यव्रतले भगवान मस्त्यको ध्यान गरे । त्यसैबेला समुद्रको विचमा विशाल मत्स्य रूपमा भगवान प्रगट भए नौका सवार आठै जनाले आफ्नो नाउ माँछाको सिँगमा बाँधे । त्यसपछी भगवानले प्रलयको समुद्र बिहार गर्दै सत्यव्रतलाई ज्ञान र भक्तिका उपदेशहरू दिए । हयग्रिव नाम गरेको राक्षसले वेदहरूलाई चोरेर समुद्रमा लुकाई राखेको थियो भगवान मत्स्यले हयग्रिवलाई मारेर वेदहरूको पनि उदार गर्नु भएको थियो।
विकिमिडिया कमन्समा Matsya सम्बन्धी अन्य सामग्रीहरू रहेका छन्।
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=मत्स्य_अवतार&oldid=788351" बाट अनुप्रेषित
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक ०६:५०, १० अप्रिल २०२० मा परिवर्तन गरिएको थियो।